GMM oo war ka soo saaray is hor istaaggii Shariif Sakiin | KEYDMEDIA ENGLISH
GMM oo war ka soo saaray is hor istaaggii Shariif Sakiin
MUQDISHO, Soomaaliya - Golaha Midowga Musharaxiinta, ayaa si weyn u canbaareeyay go’aanka lagu hor istaagay, socdaalki uu Madaxweynihii hore Koofur Galbeed, Sharif Xasan Sheikh Adan, ku tagi lahaa magaalada Baydhabo, si uu uga qeyb-galo doorashada kursiga HOP#261.
Falalkaas, ayay ku tilmaameen mid gurracan oo ka baxsan nidaamka dowlad-wanaagga waxayna xuseen inuu dalka ka socdo, ku xad-gudubka xuquuqda dastuuriga ee muwaadhinka, waxayna gabood-falkaas, dusha ka saareen Lafta-gareen oo kaashanaya Farmaajo.
Falkaas sharci-darrada ah ee lagu joojiyey mudanaha iyo taageerayaashiisa waxaa mas'uuliyaddeeda lahaa Madaxweynaha Dowladd-goboleedda Koofur-Galbeed oo kaashanaaya Dowladda Federaalka. Ayayy lagu yiri warka ka soo baxay GMM.
Waxa ay falkaas, ku tilmaameen, mid ka mid ah dhaqamada xun-xun oo doorashada loogu boobayo Madaxweynihii hore, Farmaajo, dhaqamadaas oo madaxda maamulladu, ku soo kordhiyeen siyaasadda iyo doorashooyinka dalka.
Waxa ay shacabka Soomaaliyeed iyo Beesha Caalamka, ugu baaqeen in aysan indhaha ka qarsan, falalka xad-gudubka xuquuqda muwaadhinka ee ka socdo dalka oo muhiimadiisu tahay in la boobo doorashada, waxayna ka digeen, khilaafyo hor leh iyo in natiijada doorashadu lagu qanci waayo.
Sharif Xasan, wuxuu ahaa, dhagax-dhigihii, Koofur galbeed iyo Madaxweynihii ugu horreeyay ee maamulkaas, wuxuu soo noqday, Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaka JFS, wuxuuna ka mid yahay musharixiinta u taagan baratanka xilka ugu sarreeya dalka.